သဖန်းဆိပ် ဆည်ရေဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် စပါး တင်း သိန်းပေါင်း ၆ဝဝ နီးပါး ထုတ်လုပ်ပေးနေ - Yangon Media Group
သဖန်းဆိပ် ဆည်ရေဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် စပါး တင်း သိန်းပေါင်း ၆ဝဝ နီးပါး ထုတ်လုပ်ပေးနေ
ရွှေဘို၊ ဇူလိုင် ၂၉
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန ရွှေဘို(ထိန်းသိမ်းရေး) အုပ်ချုပ်မှု အောက်ရှိ သဖန်းဆိပ်ဆည်ရေဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် စပါးတင်းသိန်း ပေါင်း ၆ဝဝ နီးပါး ထုတ်လုပ်ပေးနေကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။ အဆိုပါ သဖန်းဆိပ်ဆည်ရေဖြင့် ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ခုနှစ် နွေစပါးကို ဧကပေါင်း သုံးသိန်းကျော် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခဲ့ရာ ဇူလိုင်လဆန်းတွင် စပါးများ လှိုင်လှိုင်ရိတ်သိမ်းခဲ့၍ ယခုအချိန်တွင် မိုးစပါးများ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရန် ပြင်ဆင်နေကြသည်။
၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ခုနှစ်တွင် မိုးစပါးကို သဖန်းဆိပ်ဆည်ရေဖြင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရွှေဘိုမြို့နယ်တွင် ဧက ၈၄၃၇ဝ၊ ဝက်လက်မြို့နယ်တွင် ဧက ၉၅၅၉ဝ၊ ခင်ဦးမြို့နယ်တွင် ၅၅၃ဝ၆ ဧက၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်တွင် ဧက ၃၄၅ဝဝ၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်တွင် ဧက ၃၆၅ဝ၊ တန့်ဆည်မြို့နယ်တွင် ၄၂၇၆၉ ဧက၊ ရေဦးမြို့နယ်တွင် ၆၁၉၆၆ ဧက၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်တွင် ၉၇၆ဝ၈ ဧက၊ အရာတော်မြို့နယ်တွင် ၉၉၃၈ ဧကနှင့် ဘုတလင်မြို့နယ်တွင် ၃၆၃၄ ဧက၊ စုစုပေါင်း ၄၈၉၃၃၁ ဧက စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရန် လျာထားကြောင်း သိရသည်။
သဖန်းဆိပ်ဆည်ရေသည် တစ်မိုးနှစ်သီး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခဲ့ရာ နွေစပါးနှင့် မိုးစပါး စုစုပေါင်း ၈၅၇ဝ၇၂ ဧက ဖြစ်၍ တစ်ဧကလျှင် ပျမ်းမျှစပါးထွက်နှုန်း တင်း ၇ဝ ဆိုပါက တစ်နှစ်စိုက်ဧက စုစုပေါင်း ၈၅၇ဝ၇၂ ဧကဖြစ်သည့်အတွက် တစ်နှစ်လျှင် စပါးတင်းသိန်းပေါင်း ၆ဝဝ နီးပါး ထုတ်လုပ်ပေးလျှက်ရှိကြောင်း ဒေသစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ကြက်သွန်ဖြူစိုက် တောင်သူများ ဝယ်လက် မဆင်း၍ စီးပွားရေး အဆင်မပြေမှုများ ?
ကျောက်ဖြူ သံစစ်မြစ်အတွင်း မြစ်ရေ၏ ရေအရောင် ပြောင်းလဲ ဖြစ်ပေါ်နေမှုကြောင့် ငါးဖမ်းဆီးရရှိမှု ??
ဂီရော့ဒ်နှင့် ဝီလျံတို့၏ ဒဏ်ရာကြောင့် ချဲလ်ဆီးအတွက် ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်လာ
မော်တော်ယာဉ် ရန်ကုန်လိုင်စင် ရရန် စလစ်ကိုပင် ဈေးကြီးပေးနေရသဖြင့် ပြန်လည် ညှိနှိုင်းဆောင်ရ